महराको थुनछेक बहस शुरु हुँदैं, आजै छुट्ने सम्भावना । – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
महराको थुनछेक बहस शुरु हुँदैं, आजै छुट्ने सम्भावना ।
| प्रकासित मिति : १७ कार्तिक २०७६, आईतवार ०५:३१
काठमाडौं, १७ कात्तिक । संसद सचिवालयकी कर्मचारीमाथी जबर्जस्ती करणी उद्योगको मुद्दा लागेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्दामाथि आजदेखि थुनछेक बहस सुरु हुँदैछ ।
गत शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बयान लिने क्रम सकिएपछि उक्त मुद्धामाथि आज बहस हुन लागेको हो । प्रहरीले दर्ता गरेको अभियोजन पत्र अनुसार महरामाथि जबर्जस्ती करणी उद्योगको मुद्धा सहितको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालत पेश गरेको थियो । न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले करीब ७ घण्टा बयान लिएपछि आजका लागि बहस तय गरिएको हो ।
संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि यौन दुब्र्यबहार गरेको आरोप लागेपछि गत असोज १९ गते महरा बालुवाटारस्थित सभामुखको निवासबाटैं पक्राउ परेका थिए । जबरजस्ती करणी प्रयास गरेको आरोप लागेको निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको थुनछेक बहस आजै सकिने। सरकारी वकिल कार्यालय निकट श्रोतले जानकारी दिएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले शुक्रवार महराको बयान लिएको थियो । विहीबार दर्ता भएको मुद्दाको बयान सकिएपनि समय अभावका कारण शुक्रबार बहस हुन सकेको थिएन । शुक्रबारको बयानमा महराले आफूमाथि लागेको आरोप झुट भएको दाबी गरेका थिए । उनले जाहेरीमा भनिए झैं आफूले रक्सी नपिउने दाबी गर्दै आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अभियोग लगाइएको बताएका थिए । बयानको क्रममा महराले आफूलाई फसाउन षड्यन्त्र भएको दाबी गर्दै आफूलाई कसैमाथि हातपात समेत नगरेको बताएका थिए ।
शाहीसँग पारिवारिक सम्बन्ध भएको बताउँदै महराले बयानको क्रममा महराले स्वास्थ्य प्रतिकूलताका कारण शाहीले अस्पतालमा उपचार गराएको जानकारी पाएपछि विक्षिप्त अवस्था आउन नदिन सम्झाउन निजी गाडीमा सुरक्षाकर्मीसहित उक्त इलाकामा गएपनि कोठामा नपुगेको बताएका छन् । फोन सम्पर्क नभएपछि आफू फर्किएको महराले बयान दिएका छन् ।
त्यसैगरी पीडित भनिएकी रोशनी शाहीले पनि महराले आफूमाथि करणी वा बलात्कार प्रसाय नगरेको बताएकी छन् । रोशनीले सार्वजनिक रुपमै संचारमाध्यमार्फत प्रहरीले लामो समयसम्म मानसिक तनाव दिएर खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर उजुरी तयार गरिएको भन्दै त्यो आफ्नो नभएको बताउँदै आएकी छन् ।
आज हुने बहसमा महराको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवासायीले महरा धरौटीमा छुट्ने दाबी गरेका छन् । पीडित भनिएकी महिलाले नै उक्त आरोपको खण्डन गरिसकेको अवस्थामा महरालाई निर्दोष रहेको दाबी उनीहरुको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार महराको फोरन्सिक ल्यावको रिपोर्ट पनि आइसकेको र आरोप प्रमाणित भएको छैन । अब महरालाई हिरासतमा राखेर भन्दा धरौटीमा रिहा गरेर बाँकी अनुसन्धान गर्न सकिने प्रहरीको सुझाव रहेको बुझिएको छ ।
व्यवसायीले यसरी छल्छन् कर : सरकारबाट लिन्छन् तर बुझाउँदैनन्
रुकुम घटना : मृतक सबैको टाउकोमा चोट १७ कार्तिक २०७६, आईतवार ०५:३१
कोरोनाले भयावह रुप लिएको भारतमा फेरि सलहको आतंक १७ कार्तिक २०७६, आईतवार ०५:३१
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहने, लगानी ३.४ प्रतिशतले घट्ने । १७ कार्तिक २०७६, आईतवार ०५:३१
भारतीय अतिक्रमणको बिरोध गर्दै पोर्चुगलमा बस्ने नेपालीहरुले बुझाए विरोधपत्र । १७ कार्तिक २०७६, आईतवार ०५:३१
अन्तरजातीय प्रेमको दुःखद घटना ! १७ कार्तिक २०७६, आईतवार ०५:३१
रेमिट्यान्स घट्यो, बेरोजगारीसँगै गरिबी बढ्ने प्रक्षेपण १७ कार्तिक २०७६, आईतवार ०५:३१
१३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कारीको श्रीमती बनाएर समाजले पठायो, अर्को दिन लास रुखमा भेटियो १७ कार्तिक २०७६, आईतवार ०५:३१
कोरोना संकटको कारण अमेरिकामा डाक्टरहरुको तलब कटौती, नर्सहरु बेरोजगार बनिरहेका १७ कार्तिक २०७६, आईतवार ०५:३१
एमसिसी सम्झौता सदनको कार्यसूची बनाउँदै सरकार ! १७ कार्तिक २०७६, आईतवार ०५:३१
कोरोनाको हाउगुजी देखाएर डब्लूएचओको लकडाउन व्यापार १७ कार्तिक २०७६, आईतवार ०५:३१
प्रधानमन्त्री ओलिको सम्बोधन : कोराना फैलिनुमा भारतको योगदान ! (पूर्णपाठ सहित) १७ कार्तिक २०७६, आईतवार ०५:३१
थप ७२ जनामा कोरोना संक्रमण, कूल संक्रमितको संख्या ६७५ पुग्यो। १७ कार्तिक २०७६, आईतवार ०५:३१